Calculator: kajy ny haben'ny santionany farafahakelin'ny fanadihadiana ataonao | Martech Zone
Ny famolavolana fanadihadiana sy ny fahazoana antoka fa manana valiny marina ianao mba hahafahanao miorina amin'ny fanapahan-kevitry ny orinasanao dia mitaky fahaizana kely. Voalohany, mila mahazo antoka ianao fa ny fanontanianao dia apetraka amin'ny fomba izay tsy mitongilana ny valiny. Faharoa, mila mahazo antoka ianao fa mandinika olona ampy hahazoana valiny ara-statistika marina.
Tsy mila manontany ny olona rehetra ianao fa ho be asa io ary lafo be. Orinasa mpikaroka momba ny tsena dia miasa mba hahazoana fahatokisan-tena avo lenta, hadilanana ambany amin'ny hadisoana nefa mahatratra ny fatra farany ambany takiana ilaina. Ity dia fantatra amin'ny hoe anao haben'ny santionany. Ianao dia santionany isan-jaton'ny mponina amin'ny ankapobeny mba hahazoana valiny izay manome ambaratonga fahatokiana hanamarinana ny valiny. Amin'ny fampiasana rijan-teny eken'ny besinimaro dia azonao atao ny mamaritra ny valiny haben'ny santionany izany dia hisolo tena ny mponina amin'ny ankapobeny.
Kajy ny halehiben'ny santionanao amin'ny fanadihadiana
Ahoana no fiasan'ny santionany?
Ny Formula hamaritana ny haben'ny santionany farafahakeliny
Ny paika hamaritana ny haben'ny santionany farafahakeliny ilaina amin'ny isan'ny mponina dia toy izao manaraka izao:
S = Haben'ny santionany farafahakeliny tokony halalininao raha nomenao ny fampidiranao.
N = Ny isan'ny isan'ny mponina. Ity ny haben'ny ampahana na ny olona tianao hovahana.
e = Margin an'ny lesoka. Isaky ny maka santionany amin'ny isam-ponina ianao, dia hisy marimaritra iraisana amin'ny valiny.
z = Afaka matoky ve ianao fa hisafidy valiny ny mponina ao anatin'ny faritra iray. Ny isan-jaton'ny fahatokisan-tena dia azo adika amin'ny isa z, ny isan'ny fiviliana mahazatra ny refy nomena dia lavitra ny dikany.
p = Fiviliana mahazatra (amin'ity tranga ity 0.5%).
Tags: fanaovana kajyhaavon'ny fahatokisanafanadihadiana an'ny mpanjifaonline calculatorhaben'ny santionanyhaben'ny santionanyfanadihadianafahatokisana amin'ny fanadihadianafanadihadiana haben'ny santionanysantionany amin'ny fanadihadianafanadihadiana z-isaz-isa